Homeसमाचारमायाको अगाडी केहि लाग्दैन, यी हजुर बुबा र नातिनी जस्तो देखिने जोडी एका एक भाइरल बने (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 4, 2021 admin समाचार 5382
सामाजिक सञ्जालमा आजभोली अनौठो लाग्ने घ’टना सार्वजनिक हुन्छन् । अस्वभाविक लाग्ने वैवाहिक जोडीको अ’नौठो कहा’नीलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भित्रि पी डा भने देखाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्युज पाउन अस्व’भाविक देखिने कुरालाई नै रोमान्टिक पारामा प्र’स्तुत गरिएको हुनछ । तर उनीहरुले त्यस्तो अस्वभाविक निर्णय किन लिए ? त्यसको पछाडीको का’रण के हो ? भन्ने कुरा भने आउँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमा सेलि’व्रटी बन्ने गरेका कतिपय जोडीका वारेमा वास्त’विकता धेरै पछि मात्र खुल्छ । वखत विष्ट र उनको जोडीका विषयमा अहिले त्यस्तै कुरा सार्वज’निक भएको थियो । मिडियामा सेलिव्रटी वनेपछि उनीहरुले चर्चा पाउनकै लागि जोडी बनेको बताएका थिए । अहिले लक्ष्मी र प्रधानको जोडी पनि सार्व’जनिक भएको छ । अनमेल विवाह गरेका यो जोडीलाई युट्युवले सेलिव्रटी बनाएका छन् । दुवै जना माग्दै हि’ड्ने क्रममा भेट भएको र संगै बस्ने नि’र्णय गरेको लक्ष्मीले बताएकी छन् ।
व’जारमा माग्दै हिड्दा भेट भयो, अनि माया बस्यो लक्ष्मीले भनिन्, म माग्न गइरहे’की थिए उ पनि हाँदै आयो र कान्छी तिमी कता हिडेकी भनेर सोधे, म नबोली हिँडे । त्यतीनै बेला प्रधा’नले पनि भने, मलाई मन परेको थियो त्यही भएर सुरुमै देख्दा नै आफै बोल्न गएँ । यिनलाई पहिले देखि नै मन परेको थियो तर मलाई घ’रकाले अर्कैसंग विवाह गरिदिएका थिए । तर त्यो श्रीमतीले मलाई छोडे’र हिँडी । म फेरी यिनलाई नै खोज्दै हिँडे । चार पांच महिना खोज्दै हिँड्दा पनि नभे’टिदा म निकै निरास भएको थिए । उनले भने, मलाई राती घरवाट निका’लीदिएका थिए । त्यही बेला वर्षाको वेला मैले यिनलाई देखे । इताजा खबरबाट
October 6, 2020 admin समाचार 10648
चिकि’त्सा शिक्षा सुधार’का अभियन्ता वरिष्ठ चि’कित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनर’क्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सर’कारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक स’माजका विभिन्न तह र तप्काले वा’र्ताका माध्य’मबाट समस्या
March 5, 2021 admin समाचार 5355
लालुमैको अपार सफ&लतापछी गायक तथा संगीतकार सन्दीप न्यौपानेको नयाँ गीत सान्बाबुको भिडियो रि’लिज गरिएको छ । जसमा सन्दीपसँग लोकप्रिय गायिका सम्झना भ’ण्डारीको स्वर रहेको छ । सुदिप सागर, गोबिन्द अनेक, सुनितामी परियार र बिमला परियारको
November 25, 2020 admin समाचार 8957
चर्चित संगी’तकार अर्जुन पोखरेल’को संगीत तथा गायक निशान भट्टराईको आ’वाजमा रहेको नयाँ गीत सार्व’जनिक गरिएको छ । ‘तिमीलाई देखे’पछि माया पलायो’ बोलको गीतको भिडियो डिभाइन म्यूजिकबाट युट्युब रि’लिज गरिएको हो । गीतमा निलक’ण्ठ सुवेदीको शब्द